daraz(daraz) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
दराजले नयाँ वर्ष अभियान घोषणा, यस्ता विशेष आफर र बम्पर उपहार
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार ‘दराज’ले यही चैत २८ गतेदेखि नव वर्षको सेल– नयाँ रहर नयाँ अफर सुरु हुने घोषणा गरेको छ। नयाँ वर्षको अवसरलाई लिएर दराजले आफ्ना ग्राहकलाई आश्चर्यजनक डिल, रु. ५ हजारसम्मको भाउचर, विशेष अफरहरु, अनलाइन भुक्तानीमा विशेष साझेदार छुट, उत्कृष्ट पुरस्कारका साथै बम्पर उपहारमा नयाँ Yadea S-Like स्कुटर जित्ने...
नेपाल बैंकका ग्राहकलाई नयाँ वर्षमा विशेष अफर, दराजमार्फत सामान खरिद गर्दा १५%सम्म छुट
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र अनलाइन सपिङ पोर्टल दराज केयमु प्रालिबीच मंगलबार बैंकका ग्राहकलाई नेपाली नयाँ वर्षका अवसरमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी र दराजका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन्। बैंकले ...
दराजले गर्यो आइएमई पे डेको घोषणा, हरेक आइतबार आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्दा थप छुट
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार दराजले आइएमई पेसँग साझेदारी गरी हरेक आइतवार आइएमई पे डे सुरु हुने घोषणा गरेको छ। योसँगै दराज र आइएमई पे प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो आइएमई पे वालेटमार्फत दराजमा भुक्तानी गर्दा हरेक आइतबार १० प्रतिशत (अधिकतम रु. ३५०) सम्मको अतिरिक्त छुटको मजा लिन सक्नेछन्। यसका साथै दराजका ग्राहकले आफ्नो आइएमई पे भिसा...
काठमाण्डौ । दक्षिण एसियाको अग्रणी ई–कमर्स प्लेटफर्म ‘दराज’ ले आज आफ्नो नयाँ ब्रान्ड लोगो अनावरण गरेको छ। दराज समूहका संस्थापक र सीईओ बियार्के मिक्केलसनले आजको नयाँ ब्रान्डको सुरुआतले व्यवसायका लागि एक रोमाञ्चक पाइला सुरु भएको बताए। ‘विगत सात वर्षमा दराजले धेरै विकास गरेको छ र हामी हाम्रो यात्राको अर्को अध्यायमा अघि बढ्दै जाँदा,...
दराजको ४७ भन्दा धेरै सहरमा सेवा विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्ने निर्णय
काठमाण्डौ। नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार दराजले आगामी महिनामा देशभरि आफ्नो डेलिभरी र लजिस्टिक सेवाको विस्तारलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। सन् २०१८ मा अलिबाबाद्वारा कम्पनीको अधिग्रहणपछि दराजको मुख्य उद्देश्य भने एक देशव्यापी रसद पूर्वाधार निर्माण गर्न रहेको छ। यसमार्फत दराजले केवल देशभर आफ्नो पदचिह्न बढाउन सफलमात्र नभई देशमा एक...
काठमाण्डौ । अनलाइन बजार दराजले आफ्नो वार्षिकोत्सव अभियान- 'दराज दसैँ धमाका' आज (असोज १० गते) सुरु भएको घोषणा गरेको छ। यो अभियानअन्तर्गत ग्राहकले १० लाख न्दा बढी उत्पादनहरुमा मज्जाको छुट पाउने कम्पनीले जनाएको छ। अभियानको मुख्य आकर्षणहरु भने निःशुल्क सिपिङ, अनलाइन प्रि–पेमेन्टमा २०% (अधिकतम रु २,५००) को छुट रु. ५ हजार सम्मको मेगा...
दराजमल फेस्टिभलको घोषणा : प्रिमियम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डमा अद्भुत छुट
काठमाण्डौ। नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार ‘दराज’ ले भोलि भदौ २ गतेदेखि दराजमल फेस्टिभल सुरु हुने घोषणा गरेको छ। यस अभियानको मुख्य हाइलाइटहरू भने एड टु कार्ट, वेलकम गिफ्ट, मेगा भाउचर, बैंक कार्डमार्फत अनलाइन प्रि–पेमेन्टमा १५% (रु ५०० सम्म) छुट, इमेज रिभिउ एन्ड विन, फलो एन्ड विन, बम्पर उपहारमा XIAOMI MI 11 X PRO 5G, निःशुल्क डेलिभरी साथै थुप्रै अरु...
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार दराजले सामुसङ नेपालसँग साजेदारी गरी नयाँ ग्यालेक्सी एफ२२ को प्रि–बुकिङ सुरु भएको घोषणा गरेको छ। ग्यालेक्सी एफ२२को लन्चसँगै सामसुङको एफ सिरिज नेपालमा पहिलो चोटी भित्रिँदैछ। ग्राहक अब दराज एपमार्फत साउन ६ देखि ग्यालेक्सी एफ२२को प्रि–बुकिङ गर्न सक्नेछन्। सामसुङ ग्यालेक्सी एफ२२ अक्टा कोर...
दराजको महाबचत बजार सुरु, म्याकबुक प्रो–१३ का साथै आईफोन–१२ जित्ने मौका
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार दराजले आज साउन ३ गतेदेखि ‘दराज महाबचत बजार’ सुरु गरेको छ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य ग्राहकका लागि बचत प्रवर्द्धन गर्नु रहेको कम्पनीले जनाएको छ। अभियानका मुख्य हाइलाइटहरू भने रु. ४ हजारसम्मको छुट, बैंक कार्ड वा आईएमई पेमार्फत अनलाइन प्रि–पेमेन्टमा रु. २ हजारसम्मको छुट, रु. १ मा आईफोन १२...
टोकियो ओलम्पिक प्रवर्द्धनका लागि दराज र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साझेदारी
काठमाण्डौ। नेपालको अग्रणी अनलाइन सपिङ बजार दराजले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) सँग ‘टोकियो २०२० समर ओलम्पिक’ र ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरुको प्रवर्द्धनका लागि सम्झौता गरेको छ। एनओसीका अध्यक्ष माननीय जीवनराम श्रेष्ठ र दराजका प्रबन्ध निर्देशक लिनो अलरिंगले सातदोबाटोस्थित एनओसीको कार्यालयमा सपोर्ट फर अल...
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार ‘दराज’ ले माछापुच्छ्रे बैंक, मेगा बैंक र हिमालयन बैंकसँग साझेदारी गरी आज बिहीबारदेखि बैंक डेज अफर पुनः सुरु गरेको छ। यस अफरमार्फत ग्राहकले कार्ड प्रिपेमेन्ट गरेमा १५% रु ५०० सम्मको छुट पाउन सक्नेछन्। यी बैंकहरु दराजका ४ अन्य साझेदार बैंकहरू– सनिमा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नाबिल बैंक, र...
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी अनलाइन शपिंग बजार दराजले स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोगमा आफ्नो सबै फ्रन्टलाइन र वितरण कर्मचारीका लागि कोभिड–१९ खोप दिन आरम्भ गरेको छ। अलिबाबा समूहको स्वामित्वमा रहेका दराजले नेपाललगायत ४ अरु दक्षिण एसियाली बजारमा सञ्चालन गरिरहेका छ। वर्तमानमा दराजले नेपालका विभिन्न सहरमा ६०० बढी कर्मचारीलाई रोजगार...
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार र अलिबाबा समूहअन्तर्गतको दराजले ‘नव वर्षको भव्य सेल’ अनेक छुट लिएर आएको छ। यो अभियान चैत २९ गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म चल्नेछ। नयाँ वर्षको भव्य सेल भनेर परिचित यस अभियानमा विभिन्न उत्पादनहरुमा मूल्य कटौती छ। उदाहरणका लागि ४६ हजार ७२० रुपैयाँको वल्पुल डबल डोर फ्रिज जम्मा ३८ हजार ९९९ रुपैयाँ, ६८...
नववर्ष अभियानको तयारी पूरा गर्दै दराज, यस्तो हुनेछ यसपालिको भव्य सेल
काठमाण्डौ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन बजार ‘दराज’ ले यही चैत २९ गतेदेखि नववर्षको भव्य सेल– ‘दराज नववर्ष २०७८’ सुरु हुने घोषणा गरेको छ। नयाँ वर्षका अवसरलाई लिएर दराजले आफ्ना ग्राहकलाई आश्चर्यजनक डिल, रमाइलो अफर, अनलाइन भुक्तानीमा विशेष साझेदार छुट, उत्कृष्ट पुरस्कार साथै बम्पर उपहारमा नयाँ ड्याटसन रेडी गो जित्ने अवसर लिएर...
फागुन ११ बाट दराज हाट बजार सुरु हुने, यस्ता छन् आकर्षक अफरहरु
काठमाण्डौ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन बजार दराजले फागुन ११ गतेदेखि दराज हाट बजार सुरु हुने घोषणा गरेको छ। यस अभियानका साथ दराजले ग्राहकका लागि महा डील, शून्य ब्याजमा सजिलो मासिक किस्त (ईएमआई), खेल १ रूपैयाँको, निस् शुल्क वितरण, निस् शुल्क भाउचरहरुजस्ता आकर्षक प्रस्तावहरु लिएर आएको छ। यसका साथै ग्राहकले दराज हाट बजारमा ५ लाख...